Las Vegas ရှိ Consumer Electronics Show, Sony Xeperia XA2, XA2 Ultra နှင့် L2 တွင်ကြေငြာထားသောဖုန်းများကို BestBuy တွင်ကြိုတင်မှာယူနိုင်ပြီးဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက်တွင်တရားဝင်ဖြန့်ချိမည်။
Unboxing နှင့် Ila X ၏ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်များမှာယူရို ၁၀၀ ကျော်သာရှိသော iPhone X ၏ကိုယ်ပွားဖြစ်သည်
ဤနေရာတွင်ယူရို ၁၀၀ ကျော်လောက်အတွက် iPhone X ၏နောက်ထပ်ကိုယ်ပွား Ila X ၏ unboxing နှင့်ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်များကိုကျွန်ုပ်ထံယူဆောင်လာပါမည်။
Light in the Box တွင် Xiaomi ထုတ်ကုန်များလျှော့စျေးကိုခံစားပါ
Light in the Box တွင် Xiaomi ထုတ်ကုန်များလျှော့စျေးကိုခံစားပါ။ စတိုးဆိုင်ရှိအဓိကအာရှအမှတ်တံဆိပ်များအထူးလျှော့စျေးများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
HOMTOM: S12 စျေးကွက်ထဲတွင်ဈေးအသက်သာဆုံး 18:9စမတ်ဖုန်း
HOMTOM: S12 စျေးကွက်တွင် ၁၈: ၉ မျက်နှာရှိသောဈေးအသက်သာဆုံးစမတ်ဖုန်း။ ယင်း၏ဖန်သားပြင်နှင့်စျေးနှုန်းနိမ့်ခြင်းအတွက်ထင်ရှားကျော်ကြားသောဤဖုန်းအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Alcatel 3C: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များနှင့်ပထမဆုံးပေါက်ကြားနေသောပုံများ
Alcatel 3C: အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်တရားဝင်ပုံများပေါက်ကြားခဲ့သည်။ ဒီနှစ်ရောက်ရှိလာမယ့်ပြင်သစ်အမှတ်တံဆိပ်မှဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
OnePlus သည် ၄ ​​င်း၏ဖုန်းအသစ်ကိုဒုတိယသုံးလပတ်အပြီးတွင်တင်ပြမည်ဖြစ်သည်
OnePlus ဖုန်းအသစ်သည်ဒုတိယသုံးလပတ်အဆုံးတွင်ရောက်ရှိမည်။ ဇွန်လတွင်ရောက်ရှိလာမည့်တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်မှဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Cafago တွင်ဒေါ်လာ ၁၃၀.၃၉ အစား Blackview A10 ကို ၈၈.၉၉ ဒေါ်လာဖြင့်သာရယူပါ။
Blackview A10 သည် Cafago တွင်ရောင်းရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးကူပွန်နံပါတ်နှင့်ကန ဦး စျေး၏ဒေါ်လာ ၁၃၀.၃၉ ထက်ဒေါ်လာ ၈၈.၉၉ ဖြင့်သာရနိုင်သည်။ အသေးစိတ်ကိုသင့်အားပေးသည်။
Blocks: Android နှင့်အတူ modular စမတ်နာရီရောင်းချပြီးဖြစ်သည်
Blocks: modular Android စမတ်နာရီသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်နှင့်ပြီဖြစ်သည်။ ဒီ model နဲ့ Android ကိုပထမဆုံးလာမယ့် modular နာရီအကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာပါ။
Oukitel K10 နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်များ
ရက်သတ္တပတ်များစွာကောလာဟလများနှင့်စောင့်ဆိုင်းမှုများအပြီးတွင် Okitel ကုမ္ပဏီသည်နောက်ဆုံး၌ Oukitel K10000 ၏ ၁၁၀၀၀ mAh ဘက်ထရီပါရှိသော terminal ၏သတ်မှတ်ချက်များ၊ အင်္ဂါရပ်များနှင့်စျေးနှုန်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Xiaomi နှင့် Oppo တို့သည် iPhone X ၏မျက်နှာသော့ဖွင့်မှုကိုရရှိလိမ့်မည်
Xiaomi နှင့် Oppo တွင် iPhone X ၏ Face ID ရှိလိမ့်မည်။ ဤနည်းပညာကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုသည့်ကုမ္ပဏီနှစ်ခု၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
Banggood တွင်ဒေါ်လာ ၃၉၉.၉၉ အစား Xiaomi Mi 5S Plus ကို ၂၇၁.၁၇ ဒေါ်လာဖြင့်သာဝယ်ပါ
Xiaomu Mi 5S Plus သည် Banggood တွင် ၃၂% အထိလျှော့စျေး ပေး၍ မရပါ။ သင်သည်၎င်းကိုမူလစျေးနှုန်း၏ဒေါ်လာ ၃၉၉.၉၉ အစားဒေါ်လာ ၂၇၁.၁၇ ဖြင့်သာရနိုင်သည်။ အသေးစိတ်ကိုသင့်အားပေးသည်။
အတည်ပြုပြီးပြီ - Galaxy S9 ကိုဖေဖော်ဝါရီလမှာတင်မယ်
အတည်ပြုခဲ့သည် - Galaxy S9 ကိုဖေဖော်ဝါရီလတွင်တရားဝင်မိတ်ဆက်လိမ့်မည်။ Samsung ၏အဆင့်မြင့်တင်ဆက်မှုရက်စွဲနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
ဤရွေ့ကား CES 2018 မှာတင်ဆက်ထားတဲ့ Android Wear နာရီအသစ်များပါ
CES 2018: Android Wear ဖြင့်နာရီအသစ်များနှင့်တွေ့ဆုံပါ။ CES 2018 တွင်ပြသခဲ့သောဤစမတ်နာရီအသစ်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Sony သည်ဂျပန်နိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီဖြစ်သော Las Vegas ရှိ CES တွင်နောက်ကျကျန်ခဲ့သည်။ ဒီကွန်ဂရက်မှာပြသခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်တွေထဲမှာမယုံနိုင်စရာနားကြပ်အသစ်လေးခုတွေ့ရတယ်။
Samsung ကသူ့ရဲ့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိတဲ့စမတ်ဖုန်းကိုနို ၀ င်ဘာလမှာစတင်မယ်
Samsung ကဒီဖုန်းကိုနို ၀ င်ဘာလမှာစတင်မယ်။ ၎င်း၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖုန်းဖြင့်ကုမ္ပဏီ၏အစီအစဉ်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Samsung Galaxy On7 Prime ကို Amazon India တွင်မကြာမီရောင်းချတော့မည်ဖြစ်သည်
Samsung Galaxy On7 Prime ကို Amazon India တွင်မကြာမီရောင်းမည်။ Androidsis မှဤ terminal မှအသေးစိတ်နှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားလုံးရှိသည်။
Alcatel စီးရီး ၁၊ ၃ နှင့် ၅ - CES 1 တွင်တင်ဆက်သော Alcatel မော်ဒယ်များ
CES 2018: Alcatel သည် ၁.၃ နှင့် ၅ စီးရီးအသစ်များကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ဒီနှစ်ရောက်ရှိလာမယ့်ပြင်သစ်အမှတ်တံဆိပ်ကနေဖုန်းအသစ်တွေအကြောင်းထပ်မံလေ့လာပါ။
Galaxy J2 Pro (2018) ကို Samsung Vietnam ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်တရားဝင်ဖော်ပြသည်
လွန်ခဲ့သည့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်က Galaxy J2 Pro (2018) ပေါက်ကြားခဲ့ပြီးနောက်ယနေ့၎င်းသည်ဗီယင်နမ်ရှိ Samsung ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်တရားဝင်ပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
Android Oreo ပါ ၀ င်သည့် Xiaomi Mi A1 သည်များစွာသောဆုံးရှုံးမှုများကိုကြုံတွေ့ရသည်။ ဖုန်းတွင်အသစ်ပြောင်းခြင်းဖြစ်ပေါ်စေသည့်ပြtheနာများအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Leagoo 2018 Carnival သည် GearBest ရှိဖုန်းသုံးမျိုးအတွက်အထူးလျှော့စျေးပေးသည်
Leagoo သည်လူကြိုက်အများဆုံးဆိပ်ကမ်းသုံးခုကို GearBest တွင်လျှော့ချသည်။ ဤရွေ့ကား Leagoo KICAA MIX၊ T5 နှင့် T5C၊ သင်လက်မလွတ်နိုင်သောအလယ်အလတ်အဆင့်မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးမျိုးဖြစ်သည်။
iPhone X မျက်နှာပြင်မှုတ်သွင်းထားသောအာရှကုမ္ပဏီမှစမတ်ဖုန်းအသစ် Oukitel U18
အာရှကုမ္ပဏီမှ iPhone X မှထုတ်လုပ်သောစမတ်ဖုန်းဖြစ်သော Oukitel U18 ကိုတရားဝင်တင်ဆက်ခဲ့ပြီး၎င်းပုံစံသည်မျက်နှာပြင်၏ထိပ်ဘက်ရှိဤမော်ဒယ်၏ထူးခြားသောမျက်ခုံးကိုပေးသည်။
GearBest တွင်လျှော့စျေး 6GB RAM MAZE Alpha X ကိုရယူပါ
6GB RAM နှင့် 128GB သိုလှောင်မှုနေရာရှိသော Maze Alpha X ကို GearBest တွင် ၂၀% လျှော့စျေးဖြင့်ရရှိပြီးဒေါ်လာ ၂၄၉.၉၉ ဖြင့်ရောင်းချနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤခွင့်မပြုနိုင်သောလှုပ်ရှားမှု၏အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုသင့်အားပြောပြသည်။
၁၁၀၀၀ mAh ဘက်ထရီပါ ၀ င်သည့် OUKITEL K10 သည် ၂၁ နာရီဗီဒီယိုပြတ်တောက်စေသည်
OUKITEL K10 သည် Terminal တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၁၁၀၀၀ mAh ဘက်ထရီကိုပေးထားသည်။ ၎င်းသည် ၂၁ နာရီကျော်အတွင်း streaming များမှတဆင့်ဗီဒီယိုများကြည့်ရှုနိုင်သည်။
Nokia 3310 4G သတ်မှတ်ချက်များ
Nokia 3310 4G ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ မကြာမီစျေးကွက်သို့ရောက်ရှိတော့မည့်ထုတ်ကုန်ဗားရှင်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Samsung မှမှတ်ပုံတင်ထားသောမူပိုင်ခွင့်အသစ်သည်ဖိအားဒဏ်ခံနိုင်သည့်နည်းပညာတပ်ဆင်ထားသောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖန်သားပြင်များကိုတိုးပွားစေသည် သူတို့ကိုဘယ်လောက်ကြာကြာစောင့်ဆိုင်းရမလဲ။
Google Pixel2နှင့် Pixel2XL ၏ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်အမူအယာများပြနာများ
Pixel2နှင့် Pixel2XL ၏ဖန်သားပြင်ပေါ်ရှိအမူအယာများသည်သုံးစွဲသူများအားပြproblemsနာများဖြစ်စေသည်၊ မည်သည့်အမှားများနှင့်သူတို့၏မူလအစအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေသည်။
600mAh ဘက်ထရီပါ ၀ င်သည့်လက်ကိုင်ဖုန်း Energizer Power Max P4500S နှင့်တွေ့ဆုံပါ
Energizer သည် ၄၅၀၀mAh ဘက်ထရီကြီးမားသည့်အလယ်အလတ်တန်းစား terminal တစ်ခုကိုပြင်ဆင်ထားပြီဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Power Max P4500S ဖြစ်သည်။ ယခုလတွင်ဈေးကွက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်သူ့ကိုပြောပြကြ၏။
Sony သည် Xperia XA2, XA2 Ultra နှင့် L2 တို့ကဲ့သို့သော Terminal သုံးခုကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ Androidsis မှဤစမတ်ဖုန်းများ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးရှိသည်။
Nokia6သည်တရားဝင်ဖြစ်ပြီးတရားဝင်သတ်မှတ်ထားသည်
Nokia 6: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်ဖြန့်ချိမှုအတည်ပြုခဲ့သည် ယနေ့တင်ပြသောကုမ္ပဏီ၏အလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Aliexpress တွင် DOOGEE BL12000 လျှော့စျေးရယူပါ။
DOOGEE BL12000 သည် 12000mAh ဘက်ထရီပါရှိသည့် terminal ကို Aliexpress တွင် ၁၅% လျှော့ထားသည်။ ဒီကမ်းလှမ်းမှုကိုဇန်နဝါရီလ 15 အထိသာရရှိနိုင်ပါသည်ဟူသောအချက်၏အားသာချက်ကိုယူပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုအသေးစိတ်ပြောပြ!
OUKITEL K10: ၁၁၀၀၀ mAh ဘက်ထရီပါသည့်ပထမဆုံးစမတ်ဖုန်း
OUKITEL K10: ၁၁၀၀၀ mAh ဘက်ထရီဖြင့်ဤစမတ်ဖုန်းကိုတွေ့ပါ။ မကြာမီစျေးကွက်သို့ရောက်ရှိတော့မည်ဖြစ်သော OUKITEL စမတ်ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Exynos 9810: Galaxy S9 ၏ပရိုဆက်ဆာသည်တရားဝင်ဖြစ်သည်
Samsung က Exynos 9180 ရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ်။ Galaxy S9 မှာသွားမယ့် Samsung ပရိုဆက်ဆာအသစ်အကြောင်းထပ်မံလေ့လာပါ။
ZTE Axon M ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက်တွင်ဖြန့်ချိမည်
ZTE Axon M ကိုအာရှတွင်အကြီးဆုံးနိုင်ငံတွင်တရားဝင်ဖြန့်ချိမည်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာပေကျင်းမှာဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒီကနေ Androidsis ကသင့်အတွက်အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုပြောပြထားတယ်။
OPPO သည်ယခုနှစ်နွေရာသီတွင်စပိန်၌ဖုန်းများကိုတရားဝင်ရောင်းချမည်။ စပိန်နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိရန်ကုမ္ပဏီ၏အစီအစဉ်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Samsung သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ဖုန်းသန်း ၃၂၀ ရောင်းချရန်မျှော်လင့်ထားသည်
၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်စမတ်ဖုန်းသန်း ၃၂၀ ရောင်းချနိုင်လိမ့်မည်ဟု Samsung ကယုံကြည်သည်။ ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင်ကုမ္ပဏီ၏ရောင်းအားခန့်မှန်းချက်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
SHARP Aquos S3 (FS8032) ကိုထိုင်ဝမ်တွင်အသိအမှတ်ပြုသည်
SHARP Aquos S3 သည်ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ၏အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ NCC ထံမှအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Aquos S2 ကိုအောင်မြင်ရန်လာလိမ့်မည်။ ဤတွင် Androidsis မှသင့်အား၎င်း၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုပြသပါမည်။
Lenovo K320t: 18:9မျက်နှာပြင်ပါ ၀ င်သည့်နိမ့်ကျသည့်အသစ်စက်စက် သင်၏တိုင်းပြည်တွင်ဖြန့်ချိထားပြီးဖြစ်သောတရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏နိမ့်ကျသောအသစ်စက်စက်အကြောင်းကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။
NFC ပါသည့် Xiaomi ၏မိုဘိုင်းဖုန်းစာရင်း
လက်ရှိတွင် NFC ပါရှိသည့် Xiaomi ထုတ်ကုန်များ၏စာရင်းအပြည့်အစုံကိုရှာဖွေပါ။ ထိုကျေးဇူးကြောင့်မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
Samsung Galaxy S9 နှင့် S9 + FCC အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရ
Samsung Galaxy S9 နှင့် S9 + သည်စတင်မိတ်ဆက်ရန်အဆင့်တစ်ဆင့်တက်သွားပြီဖြစ်သည်။ ယနေ့သူတို့သည် FCC တွင်အသိအမှတ်ပြုခံရသည်။ အသေးစိတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြပါမည်။
ZTE Blade V9 တွင် ၁၈: ၉ မျက်နှာပြင်နှင့် Snapdragon 18 ပါရှိသည်
ZTE ကသူ့ရဲ့ပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းကို 18:9မျက်နှာပြင်နဲ့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မှာသင့်အတွက်အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေနဲ့အင်္ဂါရပ်တွေရှိတယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်သူ့ကိုပြောပြကြ၏။
Galaxy Note 8 သည်အချို့သောမော်ဒယ်များတွင်ဘက်ထရီပြproblemsနာနှင့်ကြုံတွေ့ရသည်။ ဖုန်းတွင်အားမသွင်းသောဘက်ထရီနှင့်ပါတ်သက်သည့်ပြtheနာများကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။
သင်၏အဆင့်မြင့် Samsung စမတ်ဖုန်းအသစ်နှင့်ပတ်သက်သောမတော်တဆမှုများကိုဖုံးအုပ်ရန် Allianz မှတရား ၀ င်အာမခံ Samsung Mobile Care
LEAGOO T5C သည် ၂၆ ရာခိုင်နှုန်းလျှော့စျေးဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကို ၃၅ ယူရိုအထိသက်သာစေသည်။ ၎င်းသည် Aliexpress မှတစ်ဆင့်ကန့်သတ်ထားသောအချိန်ဖြစ်သည်။ ရှာတွေ့သည်!
Google Pixel2အတွက်အကောင်းဆုံးလှည့်ကွက်ခုနစ်ခုသည် Google Pixel2၏အားသာချက်ကိုရယူရန်ယနေ့ရရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံးလှည့်ကွက်များကိုရှာဖွေပါ။
DOOGEE BL 7000 စမတ်ဖုန်းကို ၇၀၆၀ mAh ဘက်ထရီနှင့် Samsung မှယူရို ၁၅၀ နှင့် dual dual camera တို့ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်။ ဒီတရုတ်မိုဘိုင်းကထိုက်တန်ရဲ့လား။
Choetech T520: စျေးပေါ။ အရည်အသွေးကောင်းသောကြိုးမဲ့အားသွင်းစက်။ ၎င်း၏စျေးနှုန်းနိမ့်ထွက်ပေါ်လာကြောင်းဤကြိုးမဲ့ charger ကိုအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Galaxy J2 2018: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှင့်ပေါက်ကြားမှု မကြာမီဈေးကွက်သို့မကြာခင်ထွက်တော့မည့် Samsung ၏အလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Honor9Lite: တရားဝင်သတ်မှတ်ချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်စတင်ခြင်း။ မကြာခင်လာမယ့် Honor ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Xiaomi Redmi Note5မရှိ၊ Redmi5Plus ကအစားထိုးလိုက်သည်
Xiaomi Redmi Note5နှင့် Note5Plus တို့ကိုဈေးကွက်တွင်ဖြန့်ချိမည်မဟုတ်ပါ။ ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း။ ကုမ္ပဏီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလေ့လာပါ။
Weimei We Plus3၏ဖော်ပြချက်များ
Weimei We Plus 3: အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်တရားဝင်စတင်ခြင်း။ ဒီကိရိယာ၏စပိန်ဈေးကွက်သို့ရောက်ရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုရှာဖွေပါ။
Doogee ကကျွန်တော်တို့ကိုပထမ ဦး ဆုံးနှင့်တစ်ခုတည်းသော Fulview ဖုန်းကိုလက်ဗွေဖတ်ပြီးယူလာသည်။ ၎င်းသည် Dooge X55 ဖြစ်ပြီးမျက်နှာပြင်အပြည့် terminal ဖြစ်သည်။
Gearbest ရှိစမတ်ဖုန်းနှင့်နည်းပညာများအတွက်အထူးလျှော့စျေး။ လူကြိုက်များသောစတိုးသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုသီးသန့်ယူဆောင်ပေးသည့်အထူးလျှော့စျေးများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
နှစ်ရှည်လများစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော Nokia9ကိုတရားဝင်မိတ်ဆက်တော့မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုတင်ပြနေစဉ်၎င်းသည် FCC မှဖြတ်သန်းသွားပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်များပေါက်ကြားခဲ့သည်။
Geekbench မှလူငယ်များသည်သူတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖေဖော်ဝါရီလအကုန်တွင်တင်ဆက်မည့် Samsung Galaxy S9 + ၏ပထမဆုံးစံနှုန်းကိုတင်လိုက်သည်။
P23 Helio ပါသည့်ပထမဆုံး Fullview ဖုန်းဖြစ်သော Vernee X ကို GearBest တွင်ရောင်းချသည်။ ဒီမိုဘိုင်းကိုရဖို့မယုံနိုင်စရာအခွင့်အလမ်း!
Adups - တရုတ် spyware ကို Android မှာတွေ့နိုင်တယ်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Android ကိုထိမိသောဤစပိုင်ဝဲအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Ulefone သည် Elefone Power3ကို ၆၀၈၀ mAh ဘက်ထရီပါ ၀ င်သောအလယ်အလတ်တန်းစားဘက်ထရီကိုပြသပြီးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအချိန်ကိုသေချာစေသည်။
ကင်မရာလေးလုံးပါသည့် LEAGOO M9 အသစ်ကိုဒေါ်လာ ၆၀ အောက်သာရမည့်အချိန်ရောက်ပြီ
ဒီနှစ်ခရစ်စမတ်မှာ Samsung နဲ့ Galaxy Note 8 အတွက်အထူးလျှော့စျေးပါ
Samsung Galaxy Note 8 Gold ၏ Dual SIM ဗားရှင်းတွင်တရား ၀ င် Samsung စတိုးမှယူရို ၂၆၀ လျှော့စျေးဖြင့်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။
Nubia Z17S သည်စပိန်သို့တရားဝင်ရောက်ရှိသည်
Nubia Z17S ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်ရောင်းချမည် စပိန်နိုင်ငံသို့ရောက်သောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက
Samsung က Galaxy A8 နှင့် A8 +, အင်္ဂါရပ်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကြေငြာခဲ့သည်
ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ Samsung မှ A-range terminal အသစ်များ၊ A8 နှင့် A8 +၊ အလယ်အလတ် terminal များကိုတရားဝင်တင်ဆက်လိုက်သည်။
Nokia5သည်ခံနိုင်ရည်အရှိဆုံးစမ်းသပ်မှုကိုခံပြီးပြီလား။
Nokia5သည် JerryRigEverything ခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်မှုကိုခံယူသည်။ ကျော်ကြားသော Nokia ဖုန်းစမ်းသပ်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
ကျွန်ုပ်အတွက်တော့ Samsung Galaxy S8 Plus ၏အကောင်းဆုံးကိုယ်ပွားဖြစ်သော Meiigoo S8 ၏အသေးစိတ်နှင့်ပြည့်စုံသောအသေးစိတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်။
၅.၇ လက်မမျက်နှာပြင်နှင့်စျေးနှုန်းသက်သာသည့်စမတ်ဖုန်း M ကိုယူရို ၁၀၀ မပြည့်သော M-HORSE Pure 1 ကိုဆန်းစစ်ခြင်းသည်ထိုက်တန်သလော။
OUKITEL K6, အလယ်အလတ်အကွာအဝေး၏ငြူစူခြင်း
OUKITEL K6 ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါ။ ကုမ္ပဏီ၏လက်ရှိအင်အားအကြီးဆုံးစမတ်ဖုန်းများ၊ ၆ လက်မဖန်သားပြင်နှင့် Helio P6 ချစ်ပ်တို့ကိုကုမ္ပဏီ၏ကတိကဝတ်အသစ်ကိုရှာဖွေပါ။
စတင်ပြီးနှစ်နှစ်အကြာတွင် BlackBerry မှကတိပေးထားသည့်အတိုင်း Priv model သည်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ update များကိုလက်ခံခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်သည်
နောက်ဆုံးပေါ် Star Wars ရုပ်ရှင်ဖြစ်သောအပိုင်း ၈ နောက်ဆုံးသောဂျေဒီယိုမှနောက်ခံပုံများစွာရှိသည်
Razer သည် Razer ဖုန်းကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်ရောင်းချသည်။ Razer ကိရိယာ၏စပိန်ဈေးကွက်သို့ရောက်ရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုရှာဖွေပါ။
Samsung Galaxy A8 2018 ၏ပြန်ဆိုအမျိုးမျိုးမှာပေါက်ကြားခဲ့သည်
မကြာသေးမီကလာမည့်နှစ်တွင်ရရှိမည့်လာမည့် Samsung Galaxy A8 ၏နောက်ဆက်တွဲပြသနာများကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ကြသည် မင်းပုံတွေပြတယ်။
ယခုဗွီဒီယိုတွင်ပုံရိပ်အသစ်များ၊ Galaxy S9 နှင့် S9 Plus မည်သို့ဖြစ်နိုင်သည်ကိုဖော်ပြသည်
Galaxy S9 ၏ပုံရိပ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်လေ့လာသော်လည်းယခုတစ်ကြိမ်တွင်သင်တို့၏မော်ဒယ်လ်နှစ်ခုဖြစ်သော Galaxy S9 နှင့် Galaxy S9 Plus တို့၏ဗွီဒီယိုကိုသင်ပြပါလိမ့်မည်။
Vernee X, ဆူညံသံဖြစ်စေမည့် Android စမတ်ဖုန်း
၆ လက်မဖန်သားပြင်၊ ၆ GB GB RAM၊ MediaTek Helio P6 ချစ်ပ်အသစ်နှင့်အခြားများစွာသော Vernee X အသစ်ကိုတွေ့ပါ။
ခရစ္စမတ်နေ့၌သင်၏အိမ်သို့သွားနိုင်သော Samsung Galaxy S8 Plus ၏အကောင်းဆုံးကိုယ်ပွားဖြစ်သော Meiigoo S8 အတွက် Giveaway တွင်ပြေး။ ပါဝင်ပါ။
ယခုနှစ်စျေးကွက်အတွင်းသို့ရောက်ရှိလာခဲ့သည့်ထူးချွန်ဆုံးဖုန်းများကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၏ထိပ်တန်းမိုဘိုင်းဖုန်း ၁၀ လုံးကိုရှာဖွေပါ။
ဒေါ်လာ ၄၀ ကို Vernee Active တွင်ရယူပါ
Aliexpress အပေါ် Vernee Active အပေါ်ဒေါ်လာ ၄၀ လျှော့စျေး၏အားသာချက်ကိုယူပါ။ ဤဖုန်းတွင်ရှိသောအထူးလျှော့စျေးအကြောင်းကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။
သင်သည်သင်၏ခရစ္စမတ်နေ့ကိုဤခရစ်စမတ်အသစ်ကိုအသစ်ပြောင်းရန်စီစဉ်ပါကဤဆောင်းပါးတွင် Android မှစီမံခန့်ခွဲသောအကောင်းဆုံး tablet များကိုဖော်ပြပါမည်
Light in the Box တွင်စမတ်ဖုန်းများအတွက်အထူးလျှော့စျေးကိုရယူပါ
Light in the Box ရှိစမတ်ဖုန်းများတွင်ဤအထူးလျှော့စျေးကိုယူပါ။ လူကြိုက်များသောစတိုးယူဆောင်လာသည့်ဤကမ်းလှမ်းမှုများအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Samsung က Galaxy Note 8 အတွက်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုအသစ်တစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
Gearbest Christmas ပွဲအတွက် ၇၀% အထိလျှော့စျေး
Gearbest ခရစ်စမတ်ကင်ပိန်း - ၇၀% အထိလျှော့စျေး။ Gearbest တွင်စတင်ခဲ့သောခရစ်စမတ်လှုပ်ရှားမှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Oukitel သည် K10 ကိုလာမည့်နှစ်အစတွင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။ ဘက်ထရီ ၁၁၀၀၀ mAh ပါရှိသည်။ တစ်ပတ်အတွင်းမှာအားသွင်းစရာမလိုတော့ပေ။
Xiaomi Mi7နှင့် Mi7Plus: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များနှင့်တင်ဆက်သည့်ရက်စွဲမှာပေါက်ကြားခဲ့သည်။ တံဆိပ်၏အဆင့်မြင့်ဖုန်းများအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
ရိုးရှင်းပြီးလက်တွေ့ကျသောဗီဒီယိုသင်ခန်းစာတွင် FM Radio ကို Xiaomi Mi A1 တွင် ROOT မပါဘဲနှင့်တရားဝင်အာမခံကိုမဆုံးရှုံးဘဲမည်သို့ activate လုပ်ရမည်ကိုပြသမည်။
Xiaomi Mi A1 အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများ
Xiaomi Mi A1 ၏အားသာချက်ကိုရယူရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများ။ Xiaomi ထုတ်ကုန်ကိုအပြည့်အဝအသုံးချနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးလှည့်ကွက်များကိုရှာဖွေပါ။
Android Oreo သို့အဆင့်မြှင့်တင်သည့်စမတ်နာရီများအပြည့်အစုံ။ အဆင့်မြှင့်တင်မယ့်မော်ဒယ်များဖြင့်ဂူဂဲလ်မှထုတ်ဖော်ပြသသောစာရင်းကိုရှာဖွေပါ
OnePlus 5T ထဲကအကောင်းဆုံးကိုရယူရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများ။ OnePlus 5T တွင်အကောင်းဆုံးကိုသင်အထောက်အကူပြုမည့်ဤလှည့်ကွက်များကိုရှာဖွေပါ။
Motorola သည် Star Wars အဖျားတက်ခြင်းနှင့်လည်းပူးပေါင်းခဲ့ပြီး Star Wars - နောက်ဆုံး Medi Z အတွက်နောက်ဆုံး Jedi Moto Mod ကိုစတင်မည်ဖြစ်သည်။
Leagoo T7c သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းကိုအသစ်ပြန်လည်ပြုလုပ်ရာတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောအကြောင်းပြချက် (၇) ချက်ကိုသင့်အားပြသပါမည်။
Android Oreo သည် Android Wear2ဖြင့်နာရီများကိုထုတ်လုပ်သည်
Android Wear 2.0 နာရီသည် Android Oreo သို့မွမ်းမံသည်။ စမတ်နာရီအသစ်များကိုဗားရှင်းအသစ်သို့မွမ်းမံခြင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
1 GB Xiaomi Mi A32 ကိုစပိန်နိုင်ငံသို့တရားဝင်ရောက်ရှိသည်
32 GB GB Xiaomi Mi A1 ဗားရှင်းကိုစပိန်နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာပါပြီ။ Xiaomi ထုတ်ကုန်သစ်၏ဗားရှင်းအသစ်အကြောင်းစတင်လေ့လာပါ။
Meiigoo S8, unboxing နှင့် Samsung Galaxy S8 Plus ၏အကောင်းဆုံးကိုယ်ပွားပုံရိပ်များ
Meiigoo S8 သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းနှင့်အရည်အသွေးချောမွေ့မှု၊ အံ့သြဖွယ်မြင်ကွင်းနှင့်ဈေးနှုန်းချိုသာသော Samsung Galaxy S8 Plus ၏အကောင်းဆုံးကိုယ်ပွားဖြစ်သည်။ ယူရို ၁၅၀ အောက်မှာဆိုရင် 150 GB RAM၊4GB ROM နဲ့ Android 64 တို့ရှိတယ်။ ဒီပေါင်းစပ်မှုကဒီ Meiigoo S7.0 ကို ၀ ယ်သူတွေကိုကျေနပ်စေမှာပါ။
Las Vegas ရှိ CES ပြပွဲတွင် Samsung Galaxy S9 ကိုမမြင်နိုင်ပါ
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် Samsung ၏ Galaxy S9 သည်ဘာစီလိုနာတွင်ကျင်းပမည့် MWC 2018 မတိုင်မီအထိအလင်းရောင်အားတရားဝင်မြင်တွေ့နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းအတည်ပြုပြီးဖြစ်သည်။
Consumer Reports အရ Galaxy S8 သည် iPhone X ထက်များစွာသာလွန်သည်
Consumer Report အရ Galaxy S8 သည် Apple ၏ iPhone X ထက် ပိုမို၍ ၀ ယ်ရန်အကြံပြုထားသောစမတ်ဖုန်းဖြစ်ပြီးအကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်သည်။
TomTop တွင်အကောင်းဆုံးနည်းပညာညှိနှိုင်းမှုများမှအကျိုးရယူပါ။ ဤနည်းပညာထုတ်ကုန်ပရိုမိုးရှင်းများအကြောင်း TomTop တွင်ပိုမိုရှာဖွေပါ။
Xiaomi တက်ဘလက် "Mi Pad" သည်ဥရောပ၌ရောင်းချစဉ်၎င်းအမည်ကိုအသုံးမပြုနိုင်ဟုဥရောပတရားရုံးမှအတည်ပြုခဲ့သည်။
Galaxy A5 နှင့် A7 2018 ကို Galaxy A8 နှင့် A8 + ဟုအမည်ပြောင်းမည်
အရာအားလုံးက Galaxy A5 နှင့် A7 2018 အကွာအဝေးကိုနောက်နှစ် A8 နှင့် A8 + ဟုအမည်ပေးမည်ဟုညွှန်ပြနေသည်
Light in the Box တွင်စမတ်ဖုန်းနှင့်မှတ်ဉာဏ်ကဒ်ပြားများ၏အထူးလျှော့စျေးကိုရယူပါ
Xiaomi စမတ်ဖုန်းနှင့် Light Memory ကဒ်များဖြင့်ကမ်းလှမ်းသည်။ လူကြိုက်များသောစတိုးသည်ကျွန်ုပ်တို့အားယူဆောင်လာသည့်အထူးလျှော့စျေးများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
တရားဝင် Honor 7X ကိုစပိန်သို့တရားဝင်ရောက်ရှိသည်
Honor 7X: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှု။ ယခုစပိန်နိုင်ငံတွင်ရရှိနိုင်သည့် Honor mid-range အသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
လာမည့် Xiaomi Mi7သည် Snapdragon 845 ပရိုဆက်ဆာကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်
Snapdragon9ကိုပထမဆုံးသယ်ဆောင်နိုင်သည့် Samsung Galaxy S845 ဖြစ်သော်လည်းယနေ့ Xiaomi သည်အံ့အားသင့်ဖွယ်များနှင့်အနိုင်ရသူအဖြစ်ကြေငြာခဲ့သည်။
Oukitel သည် OUKITEL K6 ကိုယခုနှစ်မကုန်မီတွင်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။
OUKITEL K6: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်စတင်ခြင်း။ ဒီခရစ္စမတ်ပွဲကိုစတင်မည့်အမှတ်တံဆိပ်၏စမတ်ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Samsung Galaxy S9 သည်သိုလှောင်မှုပမာဏ ၅၁၂ GB အထိရှိနိုင်သည်
Samsung ၏ Galaxy S9 နှင့်ပတ်သက်သည့်နောက်ဆုံးပေါ်ကောလာဟလသတင်းများအရလာမည့် Samsung ၏စွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံးပမာဏမှာ 512 GB ဖြစ်သည်။
Banggood တွင် OnePlus 5T အပေါ်အထူးသီးသန့်အထူးလျှော့စျေး။ ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်အထိ OnePlus 5T တွင်ရရှိနိုင်သည့်အထူးသီးသန့်အထူးလျှော့စျေးအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi Redmi5နှင့် Redmi5Plus တို့၏ပထမဆုံးတရားဝင်ပုံရိပ်များ
Xiaomi Redmi5နှင့် Redmi5Plus: ပထမဆုံးတရားဝင်ပုံများ Xiaomi ဖုန်းနှစ်မျိုး၏ပထမဆုံးတရားဝင်ပုံများကိုရှာဖွေပါ။
အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်မြှင့်တင်ရေးတွင်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် LEAGOO T5c ကိုရယူပါ
ဒီအထူးမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုပြီး LEAGOO T5c ကိုမယုံနိုင်လောက်တဲ့စျေးနှုန်းနဲ့ရယူပြီးဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်အထိသင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်မသွားနိုင်ပါ။
Yoigo က Samsung Galaxy S8 ကိုဒီလဒီဇင်ဘာလမှာယူရို ၃၀၀ လျှော့စျေးနဲ့ရနိုင်တဲ့ထိပ်တန်းအဆင့်မြင့် terminal ကိုပေးပါတယ်။
သာ $2များအတွက် OUKITEL MIX 99,99 ရယူပါ
OUKITEL MIX2ကိုဒေါ်လာ ၉၉.၉၉ ဖြင့်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရနိုင်သည်။ အထူးစျေးနှုန်းဖြင့်ရရှိနိုင်သည့်ဤကိရိယာမြှင့်တင်ရေးအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Vernee Active: ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ပထမဆုံးသော anti-shock smartphone
Vernee Active - ကြမ်းတမ်းပြီးစတိုင်ကျတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ဖုန်းကိုအခုရရှိနိုင်ပါပြီ။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ anti-shock ဖုန်းအသစ် Vernee Active အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Yoigo နဲ့ Samsung Galaxy J5 အခမဲ့ရအောင်လုပ်နည်း
Yoigo မှဒီဇင်ဘာလတွင်ပြုလုပ်ရန်ကမ်းလှမ်းသောတစ်ခုမှာ Galaxy J5 2017 ကိုလစဉ်ယူရိုမပေးဘဲလုံးဝအခမဲ့ပေးသည်။
Samsung Galaxy J5 Prime ၏ပထမဆုံးသတ်မှတ်ချက်များကိုစစ်ထုတ်သည်
Samsung Galaxy J5 Prime Samsung ဖုန်းအသစ်၏ပထမဆုံးသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါ။
OnePlus 5T Star Wars Edition ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်တွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သောတရုတ်အမှတ်တံဆိပ်၏အဆင့်မြင့်ဗားရှင်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Swarovski SMARTgirl Limited Edition၊ စပိန်နိုင်ငံတွင်ရောင်းရန်သီးသန့် Swaroski crystals များပါ ၀ င်သည့် Galaxy S8 +
ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ Samsung သည်စပိန်နိုင်ငံတွင်သာရရှိနိုင်သော Galaxy S8 + နှင့်အတူသီးသန့်အမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်
ဆမ်ဆောင်း Gear Sport ကိုစပိန်မှာရောင်းပြီ စပိန်ဈေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သည့် Samsung အားကစားနာရီအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ
Galaxy Note 8 နိုဝင်ဘာလလုံခြုံရေး Update ကိုယခုရရှိနိုင်ပါပြီ
Galaxy Note 8 အတွက်နောက်ဆုံးပေါ်လုံခြုံရေး update ကိုယခုအချို့နိုင်ငံများတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်
Samsung W2018 အသစ်ကိုတရားဝင်ပေါ်ထွက်လာပြီဖြစ်ရာမကြာမီတရုတ်ဈေးကွက်သို့ရောက်ရှိလာတော့မည်ဖြစ်သော 'shell type' မိုဘိုင်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါမည်။
နောက်ဆုံးပေါ် Galaxy S8 နှင့် S8 + အတွက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာနောက်ဆုံးသတင်းသည်ဤဆိပ်ကမ်းများ၏အမြန်အားသွင်းစနစ်၏လည်ပတ်မှုကိုပျက်ပြားစေခဲ့သည်။
Bluboo ကုမ္ပဏီမှ S8 မော်ဒယ်လ်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည်။ စျေးနှုန်းမှာအလွန်ချိန်ညှိထားသော terminal ကိုအသုံးပြုသူမည်သူမဆိုအတွက်များစွာထူးခြားသောအကျိုးကျေးဇူးများရှိသည်။
Xiaomi သည်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးနှင့်စျေးနှုန်းအချိုးအစားဖြင့်နိမ့်ကျသောနေရာတွင်စိုးစံမည့်စမတ်ဖုန်းအသစ်ကိုတင်ဆက်သည်။ ၎င်းသည် Xiaomi Redmi 5A ဖြစ်သည်။ ငါတို့ကိုပြောတယ်
စျေးကွက်တွင်း terminal အသစ်တစ်ခုရောက်ရှိလာခြင်းနှင့်အတူ YouTube ၏အဓိကလိုင်းများသည်ဗွီဒီယိုများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။
Oppo F5 လူငယ် - Oppo F5 ဗားရှင်းသည်တရားဝင်ဖြစ်သည်
စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူ Oppo ကကျွန်တော်တို့ကိုမကြာခင်မှာဖြန့်ချိမယ့် terminal အသစ်တစ်ခုကိုပေးလိုက်တယ်။ ၎င်းသည် Oppo F5 လူငယ်ဖြစ်သည်။
Leagoo ကကျွန်တော်တို့ကိုယူရို ၁၀၀ ကျော်လောက်အတွက် terminal တစ်ခုဖြစ်တဲ့ S8 ကိုပေးပါတယ်။ ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုအရမ်းကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ပေးပါတယ်။
OnePlus 5T ကို Lava Red တွင်ကြေငြာခဲ့သည်။ ဤအရောင်သစ်အနီရောင်ရှိ OnePlus 5T ဗားရှင်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Galaxy S8 အကွာအဝေးကိုဖြည့်ဆည်းရန်အရောင်သစ်ကိုရရှိခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ Burgundy အနီရောင်အကြောင်းပြောနေတာနေကြသည်။
တရုတ်နိုင်ငံရှိ High-end ကုမ္ပဏီ၏ Honor V10 ၏တင်ဆက်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။ စက်ပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်သည့်အရာအားလုံးကိုသိပြီးဖြစ်သည်။
OnePlus6၏အယူအဆရှိသောဒီဇိုင်းသည်ဗီဒီယိုတွင်ပေါ်လာသည်
OnePlus 5T သည်စျေးကွက်အတွင်းသို့ ၀ င်ရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း OnePlus6သည်အယူအဆဒီဇိုင်းအသွင်အပြင်ကြောင့်ခေါင်းစီးများစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
Gearbest တွင် OUKITEL MIX2ကိုဒေါ်လာ ၂၂၉.၉၉ ဖြင့်သာရယူပါ
OUKITEL MIX ၂: Gearbest တွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုများကိုရရှိနိုင်သည်။ ကြိုတင်စာရင်းသွင်းရန်ရရှိနိုင်သည့် OUKITEL ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
Light in the Box တွင် Cyber ​​Monday 2017 ၏အထူးလျှော့စျေးများကိုအသုံးချပါ
Light in the Box တွင် Cyber ​​Monday 2017 ၏အထူးလျှော့စျေးများကိုရယူပါ။ ဤအကြီးမြတ်ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့အထူးလျှော့စျေးအပေါ်လက်လွတ်မနေပါနဲ့။
အဓိကကင်မရာနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှုကိုရရှိရန် Razer ဖုန်း
ကျွန်တော့်ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တဲ့ Android 8 တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Android 7.0 ကို Oukitel CXNUMX ကိုကြည့်ပါ
ဒီနေရာမှာ Android entry-level terminal ကိုရှာဖွေနေတဲ့အသုံးပြုသူအတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော Oukitel C8 ၏ဗွီဒီယိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်ကိုကျွန်ုပ်ဒီမှာထားပါမယ်။
Oppo A79 ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ သင်သိပြီးသားအရာအားလုံးကိုသိပြီးဖြစ်သော Oppo ကိရိယာအသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော Android Oreo အတွက် OnePlus5update ကို၎င်းကိုထည့်သွင်းရန်စိတ်ပါဝင်စားသောအသုံးပြုသူများအတွက် beta ၌ဖြန့်ချိလိုက်သည်။
ပေါက်ကြားခဲ့တဲ့ Nokia9ဒီဇိုင်းပုံရိပ်တွေ။ ယိုစိမ့်မှုကြောင့်ကျေးဇူးပြုပြီးဒီဇိုင်းကိုသိရှိထားပြီးဖြစ်သော Nokia ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Sony XZ သည် Android Oreo ကိုစတင်ရရှိသည်
Sony XZ range သည်ဤသုံးစွဲသူများစောင့်ဆိုင်းနေသည့် update ကိုလက်ခံရရှိပြီး၎င်းသည် Android Oreo ကိုခံစားနိုင်သည်
Samsung Galaxy S6 သည် Android Oreo ကိုရနိုင်သည်
အရာအားလုံးက Samsung သည် Seteran S6 ကိုနောက်ဆုံးပေါ် Android Oreo ဗားရှင်းသို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်လုပ်ဆောင်နေကြောင်းပြသနေသည်
Google Pixel XL2သည် JerryRigEeverthing ခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်မှုကိုခံယူပြီးဖြစ်သည်။
JerryRig Google Pixel XL ၏ခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်မှု ၂။ Google ၏ဖုန်းသည်အကျော်ကြားဆုံးခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်မှုကိုခံရ၏။ ဘာဖြစ်မလဲ
OnePlus5သည်နောင်တွင်မွမ်းမံမှုများတွင် OnePlus 5T ၏မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်
OnePlus5အသုံးပြုသူများအတွက်ကောင်းမွန်သောသတင်းတစ်ခုမှာ OnePlus 5T ၏မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှုစနစ်သည်၎င်း၏ရှေ့ပြေးပုံစံသို့ရောက်လိမ့်မည်
Moto Z နှင့် Z2 အတွက် Android Oreo ၏ပထမဆုံး beta ကိုဘရာဇီးတွင်ရရှိပြီး ဖြစ်၍ အခြားနိုင်ငံများသို့ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြန့်ချိရန်ဖြစ်သည်။
ဤသည်သည် Honor frames မပါဘဲပထမဆုံးမိုဘိုင်းဖြစ်သော V10 ဖြစ်သည်
Weibo မှတစ်ဆင့်၎င်း၏တင်ဆက်မှုမတိုင်မီနှစ်ပတ်အလိုတွင်လာမည့် Honor V10 ၏ပထမဆုံးအစစ်အမှန်ပုံရိပ်များကိုပေါက်ကြားစေခဲ့သည်
Galaxy S8 နှင့် S8 Plus အတွက် Android Oreo ၏တတိယ beta ကိုယခုရရှိနိုင်ပြီဖြစ်သည်
Samsung မှယောက်ျားများသည် Galaxy S8 နှင့် Galaxy S8 Plus terminal များအတွက်တတိယမြောက် Android Oreo beta ကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်
ထိပ်ဆုံးက Black Friday အတွက် PC Components, Xiaomi Special!
ဤနေရာတွင်သင်၏ထိပ်တန်း Xiaomi ဆိပ်ကမ်းများရှိအကောင်းဆုံးသောကမ်းလှမ်းချက်များနှင့်အတူ PC Components အထူး Xiaomi နှင့်အထူးအထူးသောကြာနေ့ 2017 ကိုပေးထားသည်။
ဒီအနက်ရောင်သောကြာနေ့ TomTop တွင် LEAGOO စမတ်ဖုန်းများမှအထူးလျှော့စျေးများကိုရယူပါ
TomTop ရှိ LEAGOO စမတ်ဖုန်းများအတွက် Black Friday သည်လျှော့စျေး။ အမှတ်တံဆိပ်ပစ္စည်းများတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစောင့်နေသောအထူးလျှော့စျေးများကိုမလွတ်ပါစေနှင့်။
Samsung က Galaxy Note 8 Star Wars ထုတ်ဝေမှုကိုစတင်ခဲ့သည်
မကြာသေးမီကပေါက်ကြားခဲ့သောကြောင့် Samsung သည် Star Wars ထုတ်ဝေမှု Galaxy Note 8 ကိုစတင်တော့မည်ဟုသတိပေးထားသည်
Samsung ၏ Galaxy J range သည်နောက်ကင်မရာနှစ်ခုကို ၂၀၁၈ တွင်အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်
လာမည့်စျေးကွက်သို့လာမည့် Galaxy J အသစ်သည်နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဘက်ကင်မရာကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည်။
စျေးတွင်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့် Xiaomi Mi A1 ကိုဝယ်ပါ
နောက်ပြီး Xiaomi Mi A1 ကိုစျေးသက်သာစွာဝယ်ယူနိူင်သောစျေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့အာမခံချက်အပြည့်ဖြင့် ၀ ယ်ယူနိုင်ပါပြီ။
Samsung သည် Gear S3 အတွက် operating system သစ်ကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်။
ကျနော်တို့စပိန်အတွက်တရားဝင် BLU catalog ကိုငါသိ၏
BLU သည်စပိန်နိုင်ငံတွင်ရောင်းချမည့်စမတ်ဖုန်းများစာရင်းကိုကျွန်ုပ်တို့သိထားပြီးဖြစ်သည်။ သူတို့အားလုံးမှာတူညီတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်။ ဒီဇိုင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စျေးနှုန်းချိုသာသည်။ ဘယ်သူပိုပေးသလဲ။
OnPlus 5T သည်အကျော်ကြားဆုံးခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်မှုကိုခံယူရပါသလား။
OnPlus 5T သည်အကျော်ကြားဆုံးခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်မှုကိုခံယူပါလိမ့်မည်။ OnePlus 5T ခံယူထားသည့်ခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Galaxy S9 ၏တရားဝင်တင်ဆက်မှုမတိုင်မီသုံးလအကြာတွင် Galaxy ၏အဓိကစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်သည် Geekbench မှတစ်ဆင့်ဖြတ်သန်းသွားသည်။
Samsung Galaxy J5 Prime 2017 နှင့် J2 Pro 2018 အသေးစိတ်အချက်အလက်များပေါက်ကြားခဲ့သည်
J စီးရီးတွင်ထည့်သွင်းမည့် Samsung terminal အသစ်နှစ်မျိုး၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစစ်ထုတ်ထားသည်။ ၎င်းတို့သည် Galaxy J5 Prime 2017 နှင့် J2 Pro 2018 ဖြစ်သည်။
Honor V10 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလူသိများသည်
Honor V10 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလူသိများသည်။ ဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်တွင်မိတ်ဆက်ခဲ့သောအမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
BlackBerry Motion ၏ဈေးအကြီးဆုံးပြိုင်ဘက်ဖြစ်နိုင်သည်
BlackBerry သည်စျေးကွက်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိပြီး "Motion" မော်ဒယ်လ်အသစ်ကိုကောင်းမွန်စွာတပ်ဆင်ထားသောစမတ်ဖုန်းဖြင့်ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်စတင်မည်။
ဤအချက်များသည်ဥရောပသို့ရောက်ရှိပြီးဖြစ်သော Honor 6A Pro ၏သတ်မှတ်ချက်များဖြစ်သည်
Honor 6A Pro: အီတလီမှာရရှိနိုင်တဲ့ low-end အသစ် ဥရောပစျေးကွက်တွင်ရှိပြီးဖြစ်သောအသစ် Honor ဖုန်းအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
ဤနေရာတွင် Nokia6၏စျေးနှုန်းနှင့်အညီတူညီသောဈေးနှုန်းအတိုင်းအတာအောက်တွင်ရှိသည့်ကတိထားသည့်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း Nokia XNUMX ၏ terminal ကိုသင်တို့အားငါထားခဲ့၏။
Oukitel K5 အသစ်သည် ၁၈: ၉ မျက်နှာပြင်၏လမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်သည်
Oukitel မှနောက်ထပ်လွှတ်တင်မှုမှာ ၁၈: ၉ format ဖြင့် ၅.၇ လက်မမျက်နှာပြင်ပါသည့် K5 model ဖြစ်သည်။
သင်သည် OnePlus 5T အသစ်၏ wallpapers ကို download ပြုလုပ်လိုပါကဤဆောင်းပါး၌ 4k resolution ဖြင့်၎င်းတို့ကို download လုပ်ရန်လင့်ခ်များကိုထားရှိပါသည်။
OnePlus 5T သည်ယခုတရားဝင်ဖြစ်နေပြီ - အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုသိထားပါ
တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေငြာပြီးဖြစ်သော OnePlus 5T အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့သိရှိထားပြီးဖြစ်သည်။
Xiaomi Redmi5နှင့် Redmi5Plus တို့သည်နို ၀ င်ဘာလကုန်တွင်ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပြီးအာရှကုမ္ပဏီ၏အလယ်ပိုင်း / အနိမ့်ပိုင်းတွင်ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
Tomtop ရှိ Blackfriday အတွက်စမတ်ဖုန်းနှင့် RC မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များအတွက်အကောင်းဆုံးအပေးအယူ။ TomTop တွင် Black Friday ပရိုမိုးရှင်းအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
တရုတ်နိုင်ငံမှထုတ်လုပ်သူ Doogee ကလာမည့်နှစ်၏အလင်းရောင်ကိုမြင်နိုင်သောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောစမတ်ဖုန်းတစ်ခုကိုတီထွင်နေသည်
ဤမြှင့်တင်ရေး၏အားသာချက်ကိုယူပြီး Leagoo T5c ကိုဒေါ်လာ ၁.၉၉ ဖြင့်သာရနိုင်သည်
လာမည့် Leagoo T5c လွှတ်တင်မှုကိုဆင်နွှဲရန် Leagoo မှယောက်ျားများသည်ဒေါ်လာ ၁.၉၉ ဖြင့်ဝယ်ယူမှုငါးခုကိုရုန်းထွက်နေကြသည်။
ရှေ့ကင်မရာ၏အနေအထားကိုပြောင်းလဲစေသော terminal အသစ်ဖြစ်သော Xiaoi Mi Mix 2s ၏ပထမဆုံးပုံရိပ်များဖြစ်နိုင်သည်ကိုစစ်ထုတ်ပြီးဖြစ်သည်။
Samsung Galaxy S8 မိုက်ခရိုဆော့ဖ် Edition ကိုယခုရရှိနိုင်ပါပြီ
Samsung Galaxy S8 မိုက်ခရိုဆော့ဖ် Edition ကိုယခုရရှိနိုင်ပါပြီ။ ယခုရရှိနိုင်သော Samsung ၏အဆင့်မြင့်ဗားရှင်းအသစ်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Xiaomi ကယူအက်စ် ၂၀၀ အောက်က Xiaomi Mi A1 ကိုထုတ်လုပ်တော့မှာပါ
စပိန်နိုင်ငံသို့တရားဝင်ရောက်ရှိလာသည့် Xiaomi ကုမ္ပဏီသည်မကြာမီတွင် Mi A1 မော်ဒယ်လ်ကိုသိုလှောင်မှုပမာဏ ၃၂ GB နှင့်ယူရို ၁၉၉ ဖြင့်ရောင်းချမည်။
Qualcomm MediaTek ၏ကြေငြာချက်အရအလယ်အလတ်နှင့်အနိမ့်ကျသောနေရာများတွင်အာရုံစိုက်ရန် high-end ပရိုဆက်ဆာများ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းကိုရပ်တန့်မည်ဟုကြေငြာလိုက်သည်
အောက်တိုဘာလအစောပိုင်းကတင်ပြခဲ့သော Google Pixel2XL သည်ဝေဖန်မှုများကိုခံနေရသည်။
OnePlus 5T ၏တရားဝင်တင်ဆက်မှုမတိုင်မီ ၅ ရက်အလိုတွင် terminal ၏ပထမဆုံးအစစ်အမှန်ရုပ်ပုံများကိုစစ်ထုတ်ပြီးဖြစ်သည်။
Galaxy S9: Exynos 9810 ၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော processor ကို Samsung ကကြေငြာခဲ့သည်
Samsung ကနောက်ထပ် processor ကိုထုတ်လုပ်နေပြီးဖြစ်သည်။ ဤသည် Exynos 9810၊ Samsung Galaxy S9 တွင်ကျွန်ုပ်တို့မြင်နိုင်သောစွမ်းအားပြည့်ပရိုဆက်ဆာဖြစ်သည်။
Qualcomm သည်တရုတ်နိုင်ငံ၏အဓိကထုတ်လုပ်သူများနှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှု ၁၂၀၀၀ ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်
Donald Trump ကိုတရုတ်နိုင်ငံသို့အလည်အပတ်ခရီးအပြီးမကြာမီတွင် Qualcomm ၏ထိပ်တန်းတရုတ်ထုတ်လုပ်သူ Xiaomi, Oppo နှင့် Vivo နှင့်သဘောတူညီချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Motorola သည် Lenovo လက်ထဲတွင်ရှိနေပြီးပြီးခဲ့သည့်သုံးလပတ်အတွင်းရောင်းအားများပြားလာသည်။
11.11 ၏ကမ်းလှမ်းချက်များကို Light in the Box တွင်ရှာဖွေပါ။ ဒီနေ့ Light မှာ Box တွင်ရရှိနိုင်သည့်ကမ်းလှမ်းချက်များကိုလက်လွတ်မခံပါနှင့်။
Samsung သည်တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ၏ရောင်းအားအကောင်းဆုံးပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည့်ကျော်ကြားသော Galaxy J3 ကိုအသစ်ပြန်လုပ်မည် ငါတို့သည်သင်တို့ကိုပြောပါလိမ့်မယ်
ဂျပန်ကုမ္ပဏီ FutureModel ကကျွန်တော်တို့ကို NichePhone-S လို့ခေါ်ပြီးစမတ်ဖုန်းနှင့်ထိုက်တန်သည့်အင်္ဂါရပ်များပါရှိသောကဒ်ကဲ့သို့သေးငယ်သည့် terminal တစ်ခုဖြစ်သည်။
Samsung ကတရုတ်ဈေးကွက်တွင်ဖုန်းများအားခေါက်။ လောင်းနေသည်။ လာမည့်စက်၏ပုံရိပ်များမှာယိုစိမ့်ထွက်နေသည်
TomTop တွင်ရရှိနိုင်သည့် 11.11 အထူးလျှော့စျေးများကိုလက်လွတ်မသွားပါစေနှင့်
TomTop တွင်ရရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံး 11.11 အထူးလျှော့စျေး လူကြိုက်များသောဆိုင်တွင်ဤအထူးလျှော့စျေးများကိုမလွတ်ပါနှင့်။
Samsung Galaxy S225 တွင် Yoigo ဖြင့် ၂၂၅ ယူရိုသက်သာသည်
Yoigo ကအံ့သြဖွယ်ကောင်းသော Samsung Galaxy S8 ကိုရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုသိသိသာသာလျှော့စျေးပေးထားပါတယ်
၃.၁၁.၁၁၊ တရုတ်နိုင်ငံတွင်တစ်ကိုယ်တော်နေ့အဖြစ်ကျင်းပရန် Geekbuying တွင်မတွန်းလှန်နိုင်သောကမ်းလှမ်းချက် ၃ ခု
3/11.11 ကိုဂုဏ်ပြုရန်အတွက်တရုတ်ပြည်ရှိ Geekbuying နှင့် (သို့မဟုတ်) တရုတ်နိုင်ငံရှိတစ် ဦး တည်းသောနေ့ကိုအောင်နိုင်ခြင်းမရှိသောကမ်းလှမ်းချက် ၃ ခု၊ သင်မလွဲ offers သောကမ်းလှမ်းချက် ၃ ခုရှိသည်။
Xiaomi Mi A1 ၏ဗွီဒီယိုပြန်လည်သုံးသပ်ချက်သည် Android အလယ်အလတ်တန်းစားစျေးနှုန်းဖြင့်စိုးမိုးနိုင်သည့် terminal ဖြစ်သည်။
ဒေါ်လာ ၁၉၉ ဖြင့်သာရရှိသော Doogee Mix2ကိုဝယ်ယူပါ
11 ၏ 11 ရရှိမှုကိုအခွင့်ကောင်းယူနိုင်ရန် Doogee မှယောက်ျားများသည်ဒေါ်လာ ၁၉၉ ဖြင့်သာ MIX2ကိုရရှိရန်မယုံနိုင်လောက်အောင်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။
11-11 ကမ်းလှမ်းချက်များ၏အားသာချက်ကိုယူ။ သင်၏ Leagoo လုံးဝအခမဲ့ရ
နို ၀ င်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် Leagoo သည်ထိုနေ့ရက်တွင်၎င်းတို့၏မော်ဒယ်များကို ၀ ယ်သောသုံးစွဲသူများအကြားအခမဲ့ ၀ ယ်ယူမှု ၅ ခုကိုအဆင့်မြှင့်တင်မည်ဖြစ်သည်။
Samsung က Apple ကိုသူ့ရဲ့ကြော်ငြာကိုလှောင်ပြောင်သည်
Samsung ကထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့သည် သူသည်အက်ပဲကိုကုန်သွယ်ရေးအသစ်တစ်ခုတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ပြီးတော့ Galaxy ရဲ့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကို iPhone နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပါ။
BLU Studio J8 ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စျေးနှုန်းကသင့်ကိုအောင်မြင်လိမ့်မည်
BLU Studio J8 သည်မကြာမီတွင်မိသားစု၏အခြေခံအကျဆုံးပုံစံများအဖြစ်စပိန်သို့ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်၊ ဒီဇိုင်းနှင့်စျေးနှုန်းကသင့်ကိုအံ့အားသင့်စေလိမ့်မည်။
ဒီမယုံနိုင်စရာ Lightinthebox ကမ်းလှမ်းချက် ၄ ခုရဲ့အားသာချက်ကိုယူပါ
Lightinthebox ရှိလူငယ်များက TV Box တစ်ခုသို့မဟုတ် Xiaomi MI A4 ကိုရှာနေသည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်တို့မမျှော်လင့်နိုင်သည့်အံ့မခန်းဖွယ်ကမ်းလှမ်းချက် ၄ ခုကိုပေးသည်။
OPPO R11S သည်၎င်း၏ပထမဆုံးနေ့တွင်ဘွတ်ကင်မှတ်တမ်းများကိုချိုးဖျက်သည်
OPPO R11S သည်အရံမှတ်တမ်းများကို၎င်း၏ပထမဆုံးနေ့တွင်ချိုးဖောက်သည်။ ဖုန်းတွင်ကြိုတင်မှာကြားထားသည့်အရေအတွက်များအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။
OnePlus မှထုတ်ဖော်ပြသသည့် OnePlus 5T ၏ပထမဆုံးတရားဝင်ပုံရိပ်။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်သည်၎င်း၏အဆင့်မြင့်သစ်၏ပထမဆုံးပုံရိပ်ကိုထုတ်ဝေသည်။
အချို့သော Google Pixel2XL များသည် Android ကိုမတပ်ဆင်ပဲရောက်လာသည်။ အချို့ဖုန်းများတွင် operating system မရှိသည့်ဤကြီးမားသောအမှားအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
Banggood တွင်အကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းရောင်းသည်။ ဤရွေးချယ်ထားသောစမတ်ဖုန်းများထဲမှလူကြိုက်များသောစတိုး၏ကမ်းလှမ်းချက်များအကြောင်းပိုမိုရှာဖွေပါ။